Tonga eto an-tanindrazana i Ramatoa Lalao Ravalomanana – Malag@sy Miray
Araka ny vaovao voaray hatry ny anikeo maraina dia tonga soa aman-tsara eto Antaninarivo Ramatoa Lalao Ravalomanana. Fiaramanidina manokana an’ny GS Aviation no nitondra azy sy ny vinantolahiny Radavidra. Tamin’ny 5 ora maraina teo no tonga teny amin’ny seranampiaramanidina teny Ivato izany fiaramanidina izany.
Avy hatrany moa dia nihazo ny toeram-pitsabon-dry masera etsy Ankadifotsy ireto vao tonga sy ny mpitsena rehefa avy nifampiarahaba narahin-dranomasom-pifalina fa tafaverina an-tanindrazana indray rehefa tsy teto an-toerana nandritra ny efatra taona ary voaroaka teny aminn’ny sisintany rehefa saika hihazo hiverina teto volana vitsivitsy lasa izay.
Alahelo no hita tsy tsapa teny amin-dramatoa Lalao Ravalomanana hoy ny mpitantara raha nahita ny tsy fahasalaman-dreniny izy satria dia tsy nahatadidiy azy akory, hono, ity farany.
Ny vazivazin’ny sasany moa dia ny hoe « i dada nilaza ny hiverina sy nandrasana hatry ny ela indray ity no adino fa i neny tsy nilaza na inona na inona no tonga »
Ankinina amin’Andriamanitra ny zava-drehetra fa dia mirary soa ho an’ny fianakaviana izahay. Tsy tokony arahina resaka politika ny tranga mampalahelo toy itony na ho an’ny mpomba na ho an’ny tsy mpomba.
Mba ataovy teny malagasy ahay hoe...